Akhriso:-Sidee uu u dhacay Qaraxii khasaaraha badan geystay ee Gaalkacyo? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Akhriso:-Sidee uu u dhacay Qaraxii khasaaraha badan geystay ee Gaalkacyo?
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabkii u u dhacay Qaraxii is-miidaaminta ahaa ee gelinkii dambe ee shalay ka dhacay Garoonka kubadda Cagta Cabdullaahi Ciise ee koonfurta Magaalada Gaalkacyo.
Wasiir Falagle oo la hadlay BBC-da ayaa u sheegay marka hore in Garoonka Cabdullaahi Ciise loo qorsheeyay in lagu qabto Munaasabad lagu soo dhaweynayo Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Madaxweyne Qoorqoor oo socdaal dhinaca dhulka uga soo baxay Cadaado iyo Gelinsoor, kusoo wajahnaa Magaalada Gaalkacyo.
Dadweyne farabadan ayuu sheegay Wasiirka in Garoonka ay waqti hore soo buux-dhaafiyeen, si ay uga qeyb qaatan Munaasabad lagu soo dhaweyn lahaa RW Rooble, isla markaana ay gudaha Garoonka ku jireen Wasiiro ka tirsan Galmudug uu isaga kamid ahaa iyo Saraakiil Ciidan.
Markii uu Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Madaxweynaha Galmudug ay soo gaareen gudaha Gaalkacyo ayaa Saraakiil ka tirsan Ciidanka dowladda oo qeyb ka ahaa soo dhaweynta Rooble ay banaanka uga baxeen Garoonka, si ay u hagaajiyan halkii uu soo mari lahaa Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdiga la socda.
Intaas kadib ayuu Wasiirka Warfaafinta tilmaamay in qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu soo dhex-galay Saraakiishii banaanka u soo baxay ee uu hoggaaminayay Taliye Cabdicsiis Cabdullaahi Qooje, isla markaana uu isku dhex qraxiyay, xiligaasna uu socday baaritaan lagu sameeynayay dadkii kusoo qul-qulayey Garoonka.
Falagle sheegay in xubnihii Wasiirada ah ee isaga uu kamid ahaa ee ku jiray gudaha Garoonka oo ay wadeen hab maamulka Munaasabad lagu soo dhaweyn lahaa Rooble, hayeeshee mar qura uu dhacay qarax aad u xoogan oo siweyn loo maqlay.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay inay xiligaas dareemeen qalqal iyo Jahweerar farabadan, ayna daqiiqado la aayeen cid u sheegta wixii dhacay, sidoo kalena ay maqlayeen dhawaqa rasaas ay ridayeen Ciidamo ka tirsan kuwa amniga Maamulka Galmudug.
“Dhowr daqiiqado kadib ayaan ogaanay sidii ay wax u dhaceen, meel aan aad uga fogeyn Garoonka ay ka socotay Munaasabada ayuuna qaraxii Is-miidaaminta ka dhacay, uuna qalaaftay nolosha Saraakiil sare iyo dadweyne goobta ku sugnaa” ayuu yiri Wasiirka.
Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu Wasiirka Warfaafinta Galmudug sheegay in dadkii joogay Garoonka Cabdullaahi Ciise ay Cod baahiyaal kala hadleen si aysan dadka xiligaas is buurasho uga saameyn Albaabada looga baxyo Garoonka, ayna dejiyeen xaaladda dadweynihii halkaas ku sugnaa oo dareeay jahweerar badan.
Waxaa kaloo Wasiir Falagle uu xusay in isla markiiba la joojiyay Munaasabada, Ra’iisul Wasaaraha iyo Madaxweyne Qoorqoor oo ku sugnaa gudaha Gaalkacyo ay ku wargeliyeen Qaraxii dhacay, kadibna loo gudbiyay halkii loogu tala-galay in la dejiyo.
Wasiirka Warfaafinta ayaa sheegay in intaas kadib ay bilaabeen gurmad xoogan oo lagu daad-gureeyay Meydka Saraakiishii Ciidan iyo dadkii kale ay waxyeelada soo gaartay, isla markaana waxaa dadkii dhaawacmay la geeyay Xarumo Caafimaad si xaaladooda Caafimaad loogu dabiibo.
Ugu dambeyn Wasiir Falagle ayaa tilmaamay inuu jiro khasaaro xoog le oo ka dhasshy Qaraxii is-miidaaminta ahaa ee gelinkii dambe ee shalay ka dhacay Magaalada Gaalkacyo, isla markaana ay ku dhinteen Saraakiil Sare oo ka tirsan Ciidanka dowladda Federaalka iyo kuwa maamulka Galmudug.
Saraakiisha dhintay ayaa waxaa kamid ahaa Taliyihii Ciidanka qeybta 21-aad ee Cabdicaiis Cabdullaahi Qoooje, Taliyihii Ciidanka DANAB ee Galmudug Gaashaanle Mukhtaar Cabdi Aadan, ku-xigeenkiisii, Guddoomiyihii horey ee Gaalkacyo ee Puntland Maxamuud Yaasiin Tumey iyo Saraakiil kale oo goobta ku sugnaa.
Dad ku dhow 20 ruux ayaa la sheegay inay dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen Qaraxii dhacay, kuwaasi oo la geeyay Xarumo Caafimaad oo ku yaalla Gaalkacyo, waxaana dadkaas qaarkood ay yihiin kuwo si darran uu u sameeyay Qaraxaas.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, Madaxda maamul Goboleedyada, Taliska Ciidanka Xoogga, Musharaxiinta Madaxweynaha, siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada ayaa si tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday Qaraxii shalay ka dhacay Gaalkacyo.
Al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda dhinaca Internet-ka ayaa waxaa ay ku sheegteen Mas’uuliyada Qaraxii is-miidaaminta ahaa ee ka dhacay koonfurta Gaalkacyo, iyagoona sheegay inay ku dileen Saraakiil muhiim ah oo ka tirsanaa Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug.
Madaxweynaha Puntland oo maamul Cusub u magacaabay Degmo
Faah faahin:-Dagaal ka socda xaafad ka tirsan Magaalada Muqdisho